Kuri Kushambadzira Kuchinja Chaiko? | Martech Zone
Iyi infographic inokwevera pamwechete mimwe mibairo mikuru kubva ku Accenture's CMO Kunzwisisa kwe2014, asi ndinotya kuti inovhura nemusoro unoshamisa unomirirwa zvisizvo. Inoti:
78% yeVapindura Vanobvumirana kuti kushambadza kunotarisirwa kuti kuchinje zvakanyanya mumakore mashanu anotevera.
Neruremekedzo, ini handibvumirani. Marketing irikushanduka uye dijitari iri pamberi pemaitiro mazhinji. Mabhajeti ari kuchinja, magariro uye zvemukati marongero akawedzera, uye maturusi ari kuwedzera kuverengeka uye kutengeka kwemabhizinesi ane madiki mabhajeti. Asi kushambadzira - kutora, kuchengetedza uye kusimudza dzakakomba sekare.
Ndingadai ndiine infographic yakafanana neAccenture's bold statement:
CMOs: Nguva yekushandurwa kwedhijitari kana njodzi yekusiiwa padivi
Kushambadzira kwashanduka… asi vashambadziri vazhinji, vamiririri vekutengesa, uye nzira dzekutengesa hadzina kuchinja pamwe nenguva. Ehezve, izvo zvakanaka kune vatsva midhiya vamiririri avo vanokwanisika kubatsira vatungamiriri vane hungwaru kuunza mazano avo kumberi. Asi haina pasina kurwadziwa. Svikiro masvikiro arikuenderera mberi kuyedza kuraira bhajeti rese nepo nyowani midhiya ichizviroora mukati uye iri kukura.
Chimwe chinhu chinofanira kupa, munguva pfupi, uye ini ndinotenda zororo racho richava mumasvikiro echinyakare sekudhinda uye kutepfenyura. Kana iwe uri mushambadzi uchirwa nekufambira mberi uku, ungangoda kuwedzera kuwanda kwemazano ako uye kuwana rubatsiro kuti utange shanduko kune midhiya midhiya.
Tags: 2014accenture cmo kudzidzacmo kudzidzacmo kuongororainfographic